Ryanair falls in love with Belfast again | Airline News
Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » I-Ryanair iyathandana neBelfast kwakhona
I-Ryanair iyathandana neBelfast kwakhona
I-Ryanair njengenqwelomoya ye-Ireland esekwe kwi-Intanethi ithintele iinkonzo e-UK Northern Ireland nakwisixeko sase-Belfast.
Oku ngoku kutshintshile, kwaye iBelfast iyayithanda, isamkela iRyanair eneenkanunu zamanzi.
I-Ryanair ibuyele kwisikhululo senqwelomoya saseBelfast kwaye namhlanje iqale ishedyuli yayo yehlobo eza kuthi idibanise abakhweli eYurophu kulandela ukuphungulwa kwezithintelo zokuhamba eMantla eIreland.
Ukuhamba ngenqwelomoya ukusuka kule veki ukuya kwiindawo ezintlanu kuya kuvumela abakhweli ukuba bonwabele ilanga kwaye bonwabe ePortugal naseSpain, ngeenqwelomoya eziya e-Itali ukulandela ekuqaleni kukaJulayi.
I-Ryanair iya kusebenza ukuya kuthi ga kwi-14 iinqwelomoya ngeveki ukuya e-Faro ePortugal, ngelixa abakhweli beza kukwazi ukuya e-Alicante, Malaga, nakwisiqithi esithandwayo sase-Balearic eMallorca ukuya kuthi ga kwi-14 ngeveki, kunye neBarcelona ukuya kuthi ga kwishumi ngeveki ngalo lonke ixesha lasehlotyeni.
U-Katy Best, uMlawuli wezoRhwebo kwisikhululo senqwelomoya saseBelfast, uthe:
“Ngenxa yokuncitshiswa kwezithintelo zohambo, sibona ukwanda kwemfuno kubakhweli abanomdla wokubuyela kuhambo ngenqwelomoya nasekuhambeni kumazwe aphesheya.
"Ukwamkela iinqwelomoya zokuqala zaseRyanair namhlanje kubalulekile kuba kuphawula ukuqala kwenkqubo yehlobo exakekileyo esuka kwisikhululo senqwelomoya saseBelfast."
Iinqwelomoya zokuqala ukumiliselwa kweRyanair kwisikhululo senqwelomoya saseBelfast kulandela ukungabikho kweminyaka elishumi elinanye. I-airline iya kuqala ukuhamba ngeenqwelo-moya ukuya eValencia, e-Ibiza naseMilan ukusuka kwi-1st, 2nd, kunye ne3rd Julayi ngokulandelelana.
"Amaxabiso aphantsi eRyanair kunye nenkonzo engenangxaki iyabhenela kuluhlu olubanzi lwabakhweli kwaye kuyavuyisa ukuba nenqwelomoya ibuyele kubuya kwisikhululo senqwelomoya saseBelfast."
Umlawuli weNtengiso yeRyanair, uDara Brady uthe:
“Kuyasivuyisa ukubuyela kwisikhululo senqwelomoya saseBelfast ngeli hlobo lasehlotyeni, sinikezela ngexabiso eliphantsi kubathengi bethu abakwiholide kwiindawo ezidumileyo zaseYurophu.
"Ukuphunyezwa ngempumelelo kwenkqubo yokugonya yase-UK kunye nokunciphisa izithintelo zokuhamba kunike ukwanda okufuneka kakhulu kukuzithemba kwabathengi kwaye sijonge phambili ekwamkeleni abathengi bethu kwiinqwelomoya eziya eSpain, ePortugal nase-Itali ngeli hlobo."
Fumana iindiza kunye nolwazi lokuhamba malunga neendlela ezisibhozo zokukhanya kwelanga kwiRyanair ezisuka kwisikhululo senqwelomoya iBelfast City eRyanair.co.uk
Ukufumana ingcebiso malunga nokuhamba, ndwendwela i-nidirect.gov.uk kunye Iphepha lewebhu elizinikeleyo leBelfast City Airport.
Abakhweli kufuneka bajongane neemfuno zokungena zakutshanje zelizwe abasa kulo ukuya kwimihla yabo yokuhamba.